Ny fitomboana ho an'ireo mpanome angon-drakitra sy indostrialy dia tarihan'ny firongatry ny mpampiasa vola ESG manerantany
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Ny fitomboana ho an'ireo mpanome angon-drakitra sy indostrialy dia tarihan'ny firongatry ny mpampiasa vola ESG manerantany
Ny fampiasam-bola ESG dia nitombo tamin'ny avo mbola tsy nisy toy izany tato anatin'ny taona vitsivitsy, mitarika fangatahana vaovao lehibe ho an'ny data / analytics ESG feno ary koa ny fanolorana index index ESG mba hifanaraka amin'ny fomba fampiasam-bola vaovao. Ireo mpamatsy data sy index dia samy manome lanja bebe kokoa an'ireo fizarazarana ireo mba haharaka ny tontolon'ny fampiasam-bola ESG miovaova haingana araka ny fikarohana vaovao navoakan'ny Burton-Taylor International Consulting, ampahany amin'ny fizarana Data & Analytics an'ny TP ICAP, Parameta Solutions.
"Ny mpamatsy Index dia mamaly ny antson'ny mpampiasa vola amin'ny fampivoarana ny vola mifandraika amin'ny ESG, indrindra ireo mifantoka amin'ny olan'ny toetr'andro, satria ny faharetana dia napetraka ho lohalaharana amin'ny fiahiana ara-tsosialy," hoy i Sean Eskildsen, mpandalina ao amin'ny Burton-Taylor. "Ny fitomboana matanjaka dia azo inoana fa hitohy amin'ny taona ho avy, na dia ny hetsika ara-dalàna sy ny toetry ny tsena samihafa aza dia hitsapa ny fihetseham-pon'ny mpampiasa vola amin'ny fizarana," hoy izy nanampy.
"Natosiky ny fahalianan'ny mpampiasa vola tsy mitongilana sy ny filan'ny indostria, ireo mpamatsy angon-drakitra ara-bola dia mifantoka amin'ny fanomezana vokatra sy fampahalalana izay manampy ireo mpandray anjara amin'ny tsena hanombatombana ny fanajana ny orinasa amin'ny resaka tontolo iainana, sosialy ary fitantanana," hoy i Adler Smith, mpandalina ao amin'ny Burton-Taylor, nanampy fa "Ity fangatahana data / analytics an'ny ESG ity dia avy amin'ny lafiny rehetra amin'ny tsena renivohitra, fa mifantoka indrindra amin'ny lafiny fividianana."
Burton-Taylor androany dia nanambara ny famoahana tatitra vaovao roa izay manarona ny indostrian'ny index ESG sy ny angona. Ny tatitra ESG Index dia manadihady ny vola miditra manerantany avy amin'ny mpamatsy ary manome ny fahitana ireo mpamily ny fitomboan'ny index ESG. Ny tatitry ny ESG Data/Analytics dia mijery ny fitomboan'ny anjara asan'ny data/analytika ESG amin'ny tsenam-bola sy ny fihetsiky ny mpanome data manoloana ny fiovana.